Juventus Iyo Roma Oo Isku Heystaan Xidiga Wadanka Poland Milik.
Home Horyaalka Italy juventus iyo Roma oo isku heystaan xidiga wadanka Poland Milik.
kooxaha ka xamaasha horyaalka talyaaniga ee Juventus iyo Roma ayaa si aad ah isugu heystaan xidiga reer poland arkadiusz Milik kaas oo raba inuu isaga huleelo kooxda Naqoli.
juventus ayaa Rabta ineey ka faa’iideysato weerar yahankaan maadama uu fahansan yahay qaabka dhismeedka Seria A si lamid ah Roma ayaa dhankeeda laga dareemayaa xiiso badan oo ah in dhankooda dagaal ugu jiraan Milik.
Arkadiusz Milik waxaa si dhow ula socda kooxo badan oo Yurub ah sida laga soo xigtay Calciomercato In kasta oo Marseille ay amaah ku rabto xiddiga heerka caalami ee Poland waxaa ugu cad cad Juventus iyo Roma.
Previous articlemacalinka Reer argentin Jorge SimPoali oo Qaban kara shaqada kooxda Marseille.
Next articlePep guardiola oo kala doortay midka wanaagsan Valdez, Neuer iyo Ederson.